देशैभरका स्थानीय तह पाँच घण्टाका लागि ठप्प हुँदै ! - देशैभरका स्थानीय तह पाँच घण्टाका लागि ठप्प हुँदै !
देशैभरका स्थानीय तह पाँच घण्टाका लागि ठप्प हुँदै !
२०७५, ५ पुष, 09:14:43 AM
काठमाडौं । आन्दोलनरत कर्मचारीले बिहीबार पाँच घण्टा स्थानीय तह ठप्प पार्ने भएका छन्। सोमबार देशभरका स्थानीय तह ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर कलम बन्द गर्ने अवधि हरेर दिन बढाउँदै लगेका छन्।
यस क्रममा बिहीबार पाँच घण्टा धर्ना जारी रहने बताएका छन्। जनप्रतिनिधिहरुको समेत समर्थन रहेको आन्दोलन आफ्नो माग पूरा नभएसम्म जारी राख्ने आन्दोलनकारी कर्मचारीले बताएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
राट्र बैंक भन्छ : अझै २८ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेकै छैन ?
मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका योगमय
प्रभुलाई चाहियो मेनेजरदेखि ट्रेनीसम्मका कर्मचारी